Sidinga yonke inhlanhla kulesi sikhathi sesizini - Mngqithi - Impempe
Sidinga yonke inhlanhla kulesi sikhathi sesizini – Mngqithi
April 13, 2021 April 13, 2021 Impempe.com
UManqoba Mngqithi oqeqesha iMamelodi Sundowns
Kubukeka kungasekho okuzovimba iMamelodi Sundowns ukuthi ikhale yemuke nesicoco seDStv Premiership njengoba ilokhu iqhubeka nokuwina.
AmaBrazilians ashaye ashaye iChippa United ngo 2-1 emdlalweni weligi eSisa Dukashe Stadium. Lokhu kuchaza ukuthi iSundowns seyidlale imidlalo engu-20 yeligi ingayazi induku kule sizini ka-2020/2021.
Nokho umqeqeshi weSundowns uManqoba Mngqithi ubona besazoyidinga inhlanhla emidlalweni zayo yeligi ngoba wonke amaqembu aseyalwa ngezindlela ezihlukene.
“Kuhlale kuzoba nzima kulesi sikhathi sesizini. Besazi ukuthi lento yokungabi nomqeqeshi (kweChippa) yenza ukuthi kube lukhuni kithina ukuhlaziya iqembu esizobhekana nalo. Nokho ngenhlanhla yethu senze umsebenzi omuhle, umdlalo uhambe ngendlela ebesifuna ngayo. Yonke imidlalo esiyibukile yabo ihambe ngaleyo ndlela,” kusho uMngqithi ngemuva komdlalo.
“Ukube besiwasebenzisa amathuba ngesiwombe sokuqala besizowuqeda umdlalo ngamagoli amane alula. Sithole amathuba amathathu sesibhekene nonozinti futhi ngicabanga ukuthi bekumele siqede ngabo.
“Ngesikhathi sekhefu bonke abaqeqeshi bebengakhululekile ngoba uma ugeja amathuba anje bese uthole ukuthi uhamba phambili ngo 1-0 kusuke kusengenzeka noma yini. Buka nje ukuthi kwenzekeni. Sigeje ithuba ngakolunye uhlangothi lwenkundla, babuya bayoshaya igoli,” kubeka uMngqithi.
NgoLwesine iSundowns inomdlalo onzima lapho izobhekana khona ne-Orlando Pirates kwi-quarterfinal yeNedbank Cup. Abaqeqeshi bamaBrazilians bazothemba ukuthi azoqhubeka nomgqigqo wawo omuhle wokungavumeli ukushaywa kalula kule sizini.
“Kuhle kakhulu ukuthi siwine umdlalo obalulekile esikhathini esibaluleke kakhulu sesizini. Le midlalo yasekuhambeni ngalesi sikhathi sesizini, uma wazi ukuthi unomdlalo omkhulu olandelayo, inzima kakhulu. Akulula kubadlali ukubeka imiqondo emdlalweni weChippa bebe bazi ukuthi banomdlalo wePirates ngemuva kwalokho.
“Kuyagqugquzela ukuthi sakhe amathuba, sawina nomdlalo kodwa ngicabanga ukuthi senze izinto zaba lukhuni. Bekubalulekile ukuwina ngoba manje sesiqala ukubala ukuthi mingakhi imidlalo okumele siyiwine ukuze sihlale esicongweni.
“Akekho obengacabanga ukuthi singabe silapha ngokwamaphuzu nendawo esihleli kuyona ngalesi sikhathi sesizini. Nokho sekuseduze sifike lapho sifuna ukuba khona. Sidinga yonke inhlanhla kulesi sikhathi sesizini,” kuphetha uMngqithi.
Mhlawumbe uMngqithi ukhuluma ngenhlanhla nje yingoba uyazi ukuthi ngesizini edlule iKaizer Chiefs ihlale esicongweni isikhathi eside kodwa yagcina ingasiwinanga isicoco.
Previous Previous post: OweChippa ubona besenethuba lokubalekela izembe
Next Next post: LISENETHINI: Kuthi angindize yinjabulo esiyilethelwa yi-Arrows naMaZulu